Zvekuita kana iyo Apple ID yakavharwa | IPhone nhau
Zvaunofanira kuita kana yako Apple ID yakavharwa
Pane imwe nguva isu tese takagamuchira iyi meseji pakombuta yedu, iPhone kana iPad, uye kutya kwakamhanya zvakasununguka mumuviri wedu wese. Yedu Apple ID yakavharwa uye panguva iyoyo tinorangarira data redu rese, kutenga kubva kuApp Store, iTunes, makadhi edu echikwereti ... Haufanire kuvhunduka, unongova meseji uye account yedu yakachengetedzwa zvakakwana Muchokwadi. , nekuda kwechikonzero ichocho rave risingagarwi. Ndezvipi zvikonzero nei izvi zvakaitika? Zvekuita neshoko rakadai? Tichazvitsanangurira iwe zvese pazasi.
1 Nei account yangu yakavharirwa?
2 Maitiro ekuvhura account yangu?
3 Maviri-chinhu chokwadi ndechekuti ichave mhinduro
Nei account yangu yakavharirwa?
Kana munhu (kana iwe pachako) akaisa password yako yeakaundi, kana akatadza kuramba achipindura mibvunzo yekuchengetedza nemazvo, account yako ichavharirwa nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza., kudzivirira kupinda kusingatenderwe. Izvi zvinokudzivirira kubva mukuwana masevhisi eApple kusvikira waongorora account yako. Asi tisati taona maitiro ekuzviita izvozvo, ndeapi mameseji atingaone?
"Iyi ID yeApple yakaremara nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza"
"Iwe haugone kupinda mukati nekuti aka account yakamiswa nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza"
"Iyi ID yeApple yakavharwa nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza"
Ese matatu meseji akaenzana uye anoreva zvakafanana, saka maitiro ekuita akafanana mune chero eaya matatu kesi.
Maitiro ekuvhura account yangu?
Apple ine yakatarwa webhusaiti nekuda kwechinangwa ichi: iForgot. Mariri iwe unogona kuvhura iyo account, kudzorera password yako kana kuiseta kuti uwedzere imwe nyowani. Asi kana uine XNUMX-Nhanho Verification yakavhurwa, zvinhu hazvisi kuzove zvakapusa. Iwe unorangarira here iyo kodhi yekuchengetedza iyo iyo yakaitwa Apple ikakuudza kuti usambofa wakarasa uye kuti iwe unofanirwa kugara munzvimbo yakachengeteka? Zvakanaka, ino ndiyo nguva yekuishandisa.
Nenongedzo-mbiri-nhanho, iwe unodawo unenge maviri ezvinhu zvitatu zvinotevera:
Yako Apple ID password
Kuwanika kune imwe yemidziyo yako yaunovimba
Yako yekudzorera kiyi
Kana iwe usingazive password yako uye warasikirwa nekiyi yekudzoreredza, unenge usina nzira yekudzosera account yako. Taura zvakananga kuApple kuyedza kugadzirisa dambudziko asi zvichanetsa kuzviwana.
Maviri-chinhu chokwadi ndechekuti ichave mhinduro
Apple yakaunza nyowani chengetedzo sisitimu ine iOS 9 uye OS X El Capitan iyo yakavandudza Mbiri-Nhanho Verification, uye inonzi Zvinhu zviviri kusimbiswa. Zvinoita kunge zvakafanana asi hazvisi, nekuti kiyi yekudzoresa yakapihwa, uye zvakare Apple inogona kugara ichigadzirisa account yako kana iwe uchiikumbira. Iyi nyowani yekuchengetedza system haisati yawanikwa kune wese munhu, sezvo ichiri pasi pekuvandudzwa. Kana iwe uri mumwe wevane rombo rakanaka kuti uve nayo ichishanda, yakakwana, kana zvisiri, uchafanirwa kumirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Zvaunofanira kuita kana yako Apple ID yakavharwa
Fidel Lopez akadaro
Ndanga ndichishandisa zvigadzirwa zveApple zvimwe makore gumi uye handisati ndamboona iwo meseji.
Pindura Fidel López
Jeannette ngirozi Valverde Delgado akadaro
maitiro ekuita iyo AI PHONE
Pindura Jeannette ngirozi Valverde Delgado
Luis Alberto akadaro
Iwe une rombo rakanaka, Fidel Lopez. Mharidzo yekutuka iyoyo yaonekwa kwandiri. Chinhu chinonakidza (kwete zvakanyanya kunyatsoita) ndechekuti ini ndinoenda kuforgot ndoisa nyowani nyowani uye zvakadaro, handikwanise kuwana kana kubva ku iPhone, kana kubva kumac.
Uye kupenga. handizive zvekuita
Pindura Luis Alberto
unogona kugadzirisa dambudziko rako ???
CTA YANGU YEMAIDI YAKADZIMBWA ASI KUZODZOSA IYO VAKANDITUMIRA MESIYA KUNE Nhamba YANGU YENHEMA SEZVINOSIMBISA COG ZVINOTI CHINOTIUDZA KUTI RUNYARADZO RWANGU RURI MUCHIKAMU CHOKUDZIDZA CTA ASI NDINOMIRIRA MAZUVA MABASA ASI MAZUVA E15 AKATENDESA UYE HAPANA CHINHU
Mhoroi Sandra, zvimwechetezvo zvinoitika kwandiri. Wakakwanisa here kudzorera iyo account? Zvakakutorera nguva yakareba sei? Kana kuti wakaita sei?
Mhoroi, ndine dambudziko irori, ndine chitupa changu chadzimwa uye handizive zvekuita uye ndinoda munhu anondipa rubatsiro rwekubhejera.
Rolando espinoza akadaro
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, ndanga ndakamirira kodhi kuti ndibvise iyo yekukiya yekuvhiya kwemazuva akati wandei.Iyo shuwa kusaziva zvekuita.
Pindura Rolando Espinoza
Ini ndinogara ndichigamuchira maemail ane iwo meseji, asi iye anogamuchira ibasa retsamba uye yahoo inoitumira yakananga kune spam folda.
Mhoroi, zita rangu ndinonzi Fernando, ndinogona kukuudza kuti ndine dambudziko rakakomba, foni yangu yakavharika nekuti handirangariri foni yekare kubva makore 11 apfuura
Ndokumbirawo ini ndoda kudzoreredza ruzivo rwangu data rangu handigone kugadzirisa foni yangu ipad uye iyo wachi ini handigone kugadzirisa chero chinhu, ivo vaida kutarisa account yangu uye vakatadza uye vakavhara account yangu yese uye ini handigone kuwana nekuti zvinondikumbira kuti ndipinde trust nhamba Uye ini handirangariri, ndoda handina makore mazhinji kuti handina ini hapana chandingaite nefoni yangu, ndakafonera chitoro chemaple uye havana kukwanisa kugadzirisa chero chinhu chavaiva nacho ini awa uyezve ivo vakandiudza kuti hapana chavanogona kuita
Ndokumbirawo kana mumwe munhu achigona kundibatsira ndapota ndine nhare, iphad uye wachi yakavharika
Kana mumwe munhu achigona kundibatsira padambudziko iri, handichaziva wekutumira
Ndatenda zvikuru nekuterera kwako
Yakagamuchirwa iyo Emoji inosvika muIOS 10. Paella ari pakati pavo
Izvo kudiwa kweiyo iPhone SE muUS inodarika stock